Mucjisada Eedaanka Salaadda! - Xogside
Home BARNAAMIJYADA Mucjisada Eedaanka Salaadda!
Mucjisada Eedaanka Salaadda!
Eedaanka salaadda ayaa la cadeeyay in dunida aanu marna iska taagin 24 saacdood. Aqoonyahan ku xeel dheere cilmiga xisaabaadka oo u dhashay dalka Imaaraadka laguna magacabo C/Xamiid Faadil ayaa tusaale xisaabeed ku soo saaray sida aanu dunida 24 saacadood mar walba eedaanku uga socdo.
“ Haddaba marka Eedaanka si fiican oo dhexdhexaad ah loo eedaamo wakhtiga uu qaata waa 4 daqiiqo, marka uu dhamaadana waxa ay gaadhaysa dhigta ku xigta taasi oo noqonaysa wakhtiga eedaanka ee deegaankaasi ilaa uu gaadho dhigta 360”. “ “ Taasi macnaheedu waxa uu noqonaya in 360 x 4 = 1440 daqiiqo. Waxaana halkaasi ka soo baxaya in 24 saacdoodana ay yihiin 1440 daqiiqo.
360 x 4 = 1440 ÷ 60 = 24 saac. Sidaa darteed eedaanku 24 saacdoodba mar dhig ayuu u gudbaa ayuu warbixintiisa ku soo xidhay”. ( xigasho: Islamweb.net)
Previous articleWaxaan Xaqiijinaya Rabitaankayga
Next articleMacaluumadka Maska Iyo Carabkiisa!